Casa Rural en Infunto - I-Airbnb
Casa Rural en Infunto
Asturias, Principado de Asturias, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Miguelito
U-Miguelito Ungumbungazi ovelele
I-Finca La Naguada, indlu yakho yasemaphandleni e-Infiesto, yindlu yasemaphandleni enamakhilomitha amabili ukusuka e-Infiesto, e-Piloña, emgwaqeni oyisicaba ongenawo ama-curve.
Khona ngasemfuleni i-Tide, enezindawo ezihlelekile nendawo yokupaka yangasese. Ilungele abangane nemindeni enezingane.
Indlu yethu inkulu namakamelo avulekile futhi akhanyayo anokuhlobisa okucophelela nesimanje. Ngisho naphezu kokuba sendaweni enelungelo lapho uzozwa kuphela ubuhle bomfula, ipulazi lethu lixhumene kahle kakhulu.
Indlu inekamelo lokuphumula elivulekile elinendawo evulekile yawo wonke umuntu. Inosofa ababili netafula elikhulu lokudlela; kanye nekhishi, elinakho konke futhi elinesidlo sasekuseni sabantu abangaba ngu-6.
Inamakamelo okulala amabili angu-4, angu-3 anombhede olala abantu ababili nomunye onemibhede emibili emibili emibili. Kunamagumbi okugezela amabili amakhulu anakho konke, elinye lawo lingena egumbini lokulala elilala abantu ababili.
Indlu nawo wonke amakamelo ayo ingeyokusetshenziswa kwakho okukhethekile nokuyimfihlo.
Ipulazi litholakala emakhilomitheni angu- ukusuka e-Infiesto, inhloko-dolobha yomkhandlu wase-Piloña. Kodwa-ke, ukuhamba okungaphezu kwemizuzu engu-20 (1km) kulandela umfula ukuya e-Infiesto, yindawo engcwele ye-Virgin of La Cueva. Lapho uzothola indawo yokuzijabulisa, enamabhentshi, ibha kanye nezindawo zokubhukuda zikamasipala nezinkantolo zethenisi.
Leli dolobhana lingamakhilomitha angu-1 kuphela nazo zonke ezinye izinsizakalo: ama-bar nezindawo zokudlela, izimakethe ezinkulu, amaqebengwana nezitolo zezithelo, amakhemisi, isikhungo sezempilo, ihholo ledolobha...
Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa inkundla.
UMiguelito Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VV.1566.AS
Hlola ezinye izinketho ezise- Asturias namaphethelo